daadah.com - Impetigo
Cuddurada dilaaga ah
Jirrooyinka Dhaxalka/lagu dhasho
Lafaha – Murqaha – Xubnaha
Maskaxda – Darreemayaasha
Qanjirada marin la’ / Dhiigga
Home » Cuddurada » Maqaarka » Impetigo
Impetigo waa cuddur aad u fida oo ku dhaca maqaarka carruurta inta badan da’doodu u dhaxayso 2-6 sanno. Inta badan wuxuu ku dhacaa agagaarka afka, sanka, qoorta iyo dusha sarre. Waxaa kale oo ay ku dhici kartaa gacmaha iyo lugaha.
Cuddurkaan waxaa keena inta badan labo nooc oo baakteeriya ah oo la kala yiraahdo streptococcus pyogenes iyo Staphylococcus aureus. Impetigo waxaa lagu kala qaadaa taabashada qof jirkiisa ay baakteeriyadu joogto iyo marka carruurtu wadaagaan boombalooyinka, shukumaanada iyo qalabka isboortiga.
Marka jirka ay xagtini gaarto ama cayayaan qaniino baakteeriyadu waxay fursad u helaysaa inay gasho maqaarka meeshii uu ka dhaawacmay. Dabadeed, maqaarka wuxuu yeeshaa nabro biyo galleen ah oo caabuqa, kadibna dilaaca oo yeesha malax iyo qolof inta badan u eg midabka malabka oo kale.
Calaamadaha lagu garto Impetigo
Waxaa jira noocyo badan oo Impetigo ah, oo ay kala keenaan noocyada baakteeriyada ah, laakiin caam ahaan impetigo waxay leedahay calaamadahaan:
Xirmooyin nabro yar yar oo gaduudan oo dheecaama oo ka soo baxa agagaarka afka, sanka,gacmaha, lugaha iyo barrida
Maqaarka u dhaw nabraha wuu caabuqaa oo gadduutaa
Inta badan xannuun badan ma leh laakiin cun cun bay nabruhu leeyihiin
Barrar ku yimaada qanjirada u dhaw maqaarka caabuqay
Aaakhirka nabruhu way dillaacaan,dheecaamaan, dabadeedna waxaa fuusha qolof midabka Jaallaha ah leh.
Nabro Impetigo keentay oo dhudhunka ka soo baxay – courtesy of wikimedia.com
Haddii impetigo aysan saamayn inta badan maqaarka ama aysan keenin nabro aad u tiro badan oo caabuqay, waxaa ilmaha maqaarkiisa la mariyaa boomaato Anti-biyootig ah oo dilaysa baakteeriyada. Laakiin, haddii ay baahday Impetigo ama nabruhu yihiin kuwo waawayn ilmuhu wuxuu u baahanayaa in la siiyo daawo anti-biyootic ah oo ama sharoobo ah ama kaniini ah oo socota 7-10 maalmood.
Marka ilmaha ay u bilaabato daawayn waalidiintu waa inay hubiyaan in nabraha iyo maqaarka jirran maalintii labo jeer la nadiifiyo. Isticmaal saabuunta anti-bacterialka ah oo qalaji boogaha. Haddii nabruhu sii bataan ama ilmuhu yeesho qandho si degdeg ah ula socodsii dhaqtarkaaga.
Ka hortaga Impetigo
Nadaafada guud iyo gacmo dhaqasho oo la joogteeyo waxay ka hortagtaa cuddurada maqaarka sida impetigo
Carruurta ka jar ciddiyaha, weliba kuwa u nugul Impetigo
Gogosha iyo dharka ilmaha qaba Impetigo maalin walba mayr kana ilaali ilmaha jirran inuu la wadaago carruurta kale dharka iyo boombalooyinka.
Qarowga Ilmaha June 30, 2014
Suul-nuugista May 26, 2014
Xafiiltanka walaalaha May 24, 2014
Hurdada iyo carruurta March 28, 2014
DHAAWACA MADAXA March 24, 2014
Archives Select Month June 2014 (1) May 2014 (2) March 2014 (3) January 2014 (4) December 2013 (2) November 2013 (3) October 2013 (4) September 2013 (3) August 2013 (8) July 2013 (5) June 2013 (16) May 2013 (24) April 2013 (16)
Daawo: Habka Naas-nuujinta
[contact-form-7 id="1270" title="Nagala Soo Xiriir"]
© 2019 daadah.com
Mowduucyada ku jira daadah® waxaa loo isticmaali karaa wacyigalin caafimaad oo kaliya. Haddii jirro ama shiddo caafimaad jirto la tasho dhakhtarkaaga.